Orlistat poda (96829-58-2) hplc≥98% Mugadziri & fekitori
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Orlistat poda
Rating: SKU: 96829-58-2. Category: Fat Kurasikirwa poda
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhutano hwehu Orlistat powder (96829-58-2), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Orlistat powder iyo yakagadzirwa yakakwana ye lipstatin, inowanzo inhibitor inhibitor ye pancreatic lipases yakasarudzwa kubva kubhakitiriya Streptomyces toxytricini. Orlistat chirwere chinogadziriswa kurapa kuneta. Zvisinei, nemhaka yerurimi rwaro rwakazosimbiswa, orlistat yakasarudzwa pane lipstatin yekusimbiswa sechirwere chinopesana nekuwedzeredza.
Molecular Kurema: 495.7
Chigadzirwa Chigadzirwa: Orlistat
Vanopfuura hafu yevagari vepasi rose vakamboedza chirongwa chekutarisira huremu, senge kudya, kurovedza muviri, kuvhiya, kana mishonga. Mishonga iyi yese yekuderedza uremu inoshanda chete kana iwe ukatendeka kwavari uye uchiteedzera rairo kune yekupedzisira. Nekudaro, kusarudza kuvhiyiwa kana mishonga kungangove kunokuvadza kana iwe ukasatora matanho akanyanya.
Chimiro chimiro cheOrlistat (3-D kugadzirisa)
Chimiro chimiro cheOrlistat (2-D kugadzirisa)
Makemikari zvinhu zveOrlistat
Kunotsanangurwa Atom Stereocenter Count 4
Misa chaiye 495.392 g / mol
Inotsanangurwa yakajeka yeOrlyatat powder
Mumwe kuora kurasikirwa nemishonga kuti iwe uchasangana mukutsvaga kwako kuti uwane hutano hwakakosha hwekutarisira mishonga ndeye Orlistat. Muchidimbu ichi cheOrlistat, uchawana ruzivo rwakakosha, kusanganisira kuti chii, kuti runoshanda sei, uye kuti runofanira kushandiswa sei, kuitira kuti iwe ugone kusarudza kana chiri chakanaka chakutora iwe.
Orlistat, iyo inotengeswa semishonga yemishonga pasi pezita rekutengeserana Xenical, inonzi chiremba kushaya kurasikirwa kwemishonga yakagadzirirwa kutarisa nharo dzakashata dzakadai sekuwedzera kuneta, pamwe nezvimwe zvinhu zvine chokuita nekurema. Inogadzirwa neGlaxoSmithKline semuwandisi wezvinodhaka zvinonzi Alli muviri United States neUnited Kingdom.
Orlistat's generic formulations inowanika munyika dzinoverengeka. Kubva 2000, yakarongerwa seS3 kupfuura-the-counter mishonga muAustralia. Kugamuchirwa kwaOrlistat sechirwere chepamusoro-chinodhaka chaiva nharo inopesana muUnited States. Yakaramba ichirwisana pamusoro pekushanda nekuchengeteka kwekambani neboka rekutsigira vatengi raizivikanwa seChisidenti Citizen.
Orlistat anoita se lipase inhibitor, izvo zvinowanzoreva kuti zvinodzivirira kudyiwa kwemafuta kubva muchikafu, nekudaro kudzikamisa huwandu hwe macalorie iwe aunotora. Kungofanana nemamwe akawanda kurasikirwa nemishonga, Orlistat yakagadzirirwa kushandiswa pamwe chete nemamwe mararamiro ehupenyu sekuita muviri uye kudya. Zvidzidzo zvekuchipatara zvinoratidza kuti vanhu vanoomerera nechisungo ichi vanomira mukana wokurasikirwa maviri kana matatu kilogiramu kupfuura izvo zvisingasanganisi mishonga mukurasikirwa kwemauto avo.
Chimwe chezvinhu zvinodiwa pamusoro peOrlistat ndezvokuti hazvibatsiri kukura uremu asi zvinogadzirisawo kukonzera ropa. Uyezve, izvi zvinodhaka zvinodhaka zvinotendwa kuti zvinodzivisa kutanga kwechirwere cheshuga cheshuga kuvanhu vane uwandu hwakafanana nenzira iyo mararamiro ehupenyu anoita.
Kunyange paine akati wandei maOrlistat mabhenefiti ekuti ufare nezvazvo, kune mamwe maOrlistat mhedzisiro ekuteerera. Iyo inowanzo kutaurwa parutivi mhedzisiro yeiyi yekuremerwa kurasikirwa piritsi ndeye steatorrhea. Ichi chirwere chemudumbu chinoratidzirwa nemafuta, dzakasununguka zvituru. Zviratidzo, nerombo rakanaka, zvinoderera nenguva.
Orlistat Maitiro ekuita
Orlistat ine simba Intestinal Lipase Inhibitor. Mushonga uyu unodzoreredza unoshanda-saiti inhibitor yemuzimba lipases. Mushonga uyu unogadzira covalent bond neiyo inoshanda serine saiti mu pancreatic uye gastric lipases, nekudaro ichidzivirira maitiro avo uye kudzivirira mafuta kubva kuchikafu kubva kuhydrolyzed uye kupinza. (NCI04).
Mumashoko akareruka, Orlistat inobatsira kurasikirwa kwemazivi nekuderedza pasi pancreatic uye gastric lipases, iyo ndiyo inyanzvi inokonzera mumatumbo inoparadza triglycerides. Apo idzi lipases zvakadzivirirwa, iyo hydrolyzation ye triglycerides kubva pane kudya kwako kusvika mukunyanya kuneta mafuta acids inodziviswa.
Mapiritsi anodya anotorwa nemuromo uye kamwe akatorwa; local lipase inhibition inoitika mukati meGI tract. Chechi chiduku chiduku chechirwere chinopinda mumuviri, uye vazhinji vezvinodhaka vari kubviswa kuburikidza nemafuta.
Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakawana Orlistat kuti ive yakasimba mukudzivisa inzyme inobatanidzwa mukuparadzirwa kwemasero epabonde ane ngozi. Kunyange zvakadaro, zvingava nemigumisiro yemishonga (yakadai sekudzivirira kweimwe masero asina kutarisirwa kana kusagadzikana kwebioavailability) inodzivisa kushandiswa kwayo senhengo inobatsira inopikisa. Mune imwe tsvakurudzo, vatsvakurudzi vakatora nzira yemakemikari yeproteomics kuti vawane zvinangwa zvemasero matsva zvechirwere, kusanganisira zvisiri izvo.
Pane yakajairwa tsamba yekunyorera ye120 mg katatu pazuva pazuva usati wadya, orlistat uremu hwekudzivirira piritsi inodzivirira kwakatenderedza makumi matatu muzana emafuta ezvehutano kubva pakuiswa mumuviri. Kutora mamwe madhizaiti hakupi mimwe mhedzisiro ine simba.
Orlistat inoshandiswa semutoro wekutengesa uremu. Icho chisarudzo chakanakisisa kune vanhu vane kuwandisa kana kuoma. Iyi piritsi yekurasikirwa yakakosha inokurudzirwa kuti ishandiswe nevanhu vane zvinetso zvehutano zvine chokuita nekuremera. Inopikira kubatsira vanhu kwete kungorasikirwa nemutoro, asiwo kunobatsira kuvadzivisa kuti vasawanazve kuyerwa kwavakaita. Nokuita kudaro, zvinobatsira kuderedza dambudziko rekurwirwa kwepamusoro kweropa, chirwere cheshuga, chirwere chemwoyo, nezvimwe zviitiko zvakawanda zvehutano izvo zvinobatanidzwa nekuwedzerwa.
Muwandu wekurema kwekureruka mushure mekutora Orlistat kunosiyana kubva kune mumwe munhu kune mumwe. Vatsvakurudzi vanomhanya kuongororwa kwemakiriniki anosvika gore rimwe vakaona kuti pakati pe35.5 muzana uye 54.8 muzana yezvidzidzo zvakakwanisa kuwana 5 muzana inowedzera kuderera mumuviri wenyama, kunyange zvazvo kwete yose yakarasikirwa yakave yakawandisa. Pamusoro pe16.4% -24.8 yezvidzidzo zvakakwanisa kuzadzika zvishoma ne10 muzana inoderera mumafuta emuviri. Apo hurukuro idzi dzakarega kutora Orlistat, nhamba yakawanda yavo yakawana zvakare kusvika ku35 muzana yehuremu hwavakakwanisa kurasikirwa.
Orlistat inouya iri muchimiro che turquoise, yakaoma-gelatin capsules ine mapellets ehupfu uye inorema 120-mg. Iyo yakakurudzirwa yezuva nezuva chipimo chemushonga katatu pazuva. Iwe haufanire kutora ese matatu mapiritsi uchienda, asi panzvimbo pezvo tora piritsi rega rega nechikafu chikuru chine mafuta, kureva, imwe yekudya kwemangwanani, imwe yekudya kwemasikati, uye imwe yekudya kwemanheru. Unogona kutora piritsi rega rega nekudya kana kusvika paawa rimwe mushure mekudya. Kana chikafu chikawanzoshayikwa, kana kana chikafu chako chisina mafuta, iyo Orlistat dose inogona kusiiwa. Maitiro ari pamusoro peyero yezuva nezuva yakakurudzirwa haana kuwanikwa kuti ape chero rubatsiro rwekuwedzera.
Orlistat inonyanya kubudirira kana ichibatanidzwa nemamwe mano ekurasikirwa kwekureruka zvakadai sokunamatira kune kudya kunovaka muviri, kuderedzwa-koriori kudya uye kugara uchidzidzira. Iwe unorayirwa kuti utore piritsi yekurasikirwa nehokudya ine huwandu hunenge huwandu hwe30 muzana yekoriyori kubva kumafuta. Migumisiro yemishonga inowanikwa nokukurumidza apo 24-48 maawa mashure mushure mekutora chirwere.
Orlistat yakawanikwa ichibudirira mukuderedza kunwiswa kwemamwe mavhitamini ane mafuta uye beta-carotene. Saka nekudaro, vanhu vanonwa piritsi vanokurudzirwa kuinwa pamwe chete nemavhitamini akawanda ane mavhitamini ane mafuta kuti ave nechokwadi chekudya kwakakwana. Zvinokurudzirwa kuti vhitamini yekuwedzera inotorwa kanenge maawa maviri isati yatanga kana mushure mekutora Orlistat.
Kana vari ivo vanotambira chirwere che cyclosporine, vanorayirwa kuti vatungamirire cyclosporine kwemaawa mashoma 3 mushure mokutora Orlistat. Kune avo vanogamuchira levothyroxine therapy, vanokurudzirwa kutungamirira levothyroxine therapy maawa mashoma 4 mushure mokutora Orlistat. Avo vanotora zvose Orlistat uye levothyroxine vanofanira kuongororwa zvakanyatsonaka nokuda kwekuchinja kwehutachiona basa.
Pakupedzisira, orlistat yakanyatsotorwa pasi pemurairo wechiremba kana wemishonga. Zvisinei, muZ2007, US Food and Drug Administration yakabvumira kuti iwedzere kune-market-market, saka, ichiita kuti iwanike kune wese.
Chengetedza chero chero yeropa rekuita
Usati watora ichi chirwere, zvinonzwisisika kutaurira chiremba wako pamusoro pehupi hupi hwehutachiona hunoitika. Orlistat ine mishonga isingabatsiri, iyo inogona kunge isingafadzi iwe, zvichiita kuti uwedzere kugadziriswa kwemagetsi uye nemigumisiro. Mamwe acho anosanganisira cellulose, microcrystalline, gelatin, silica, uye sodium starch glycolate.
Funga nezvezvenyaya yezvokurapa
Iwe unofanirwa kugovana nemudzimai wako wemishonga kana chiremba pamusoro pemhando ipi zvayo yehutano iwe ungave uine. Izvi ndezvokuti orlistat inopesana nezvimwe zvinhu zvisina kunaka uye zvinetso, kunyanya izvo zvinosanganiswa nekudya.
Kana iwe uchitambura kune chero ipi zvayo pasi apa, zvinokurudzirwa kutsvaga mamwe mazwi kubva kune unyanzvi.
Ichi chisingaoneki chinokonzera kukwana kusakwana kwezvokudya zvekudya pamwe neGIT system. Iwe unofanirwa kuona kuti orlistat pachayo inoshanda nekudzivisa kudyiwa kwemafuta. Hisquequequequequeque hisquequeque his hisquequeque his hisquequeque his hisquequequeque hisquequequequeque followingque produits his produitsque hisque following vers produits hisquequequequeque hisque hisque hisqueque hisqueque hisque followingque produitsquequequequeque produits hisque hisquequequequequequequeque his his his hisque his following produits produitsque his hisonn hisqueque his hisquequequeque hisquequeque his his produits produitsquequequeque hisque produitsqueque his hisque hisquequeque
Chirwere chechiropa kana cholestasis
Iyi ndiyo mamiriro umo mune kuvharirwa kweropa kuyerera kuchiropa. Kune mishumo yakati wandei inobatanidza orlistat kune yakanyanya chironda chekukuvara, kunyange ichiitika mune zvisingawanzo zviitiko kana pasi peyero yakakwira.
Izvi zvinosanganisira cholecystectomy uye syndromes yakabatana.
Mamwe mararamiro aunofanira kuudza kumunhu wako wemishonga inosanganisira kutapurika kweHIV, chirwere chetachiona, mafungiro eminzwa, kugumburwa, kana kuputika. Pakunetseka kana kunetseka, orlistat inogona kuguma kusina kubatanidza kurapwa kweanopempile nekupindira nekudya.
Zvimwe zvezvinetso izvi zvinonzi bulimia uye anorexia. Uyezve, hapana chikonzero chekutora orlistat kana iwe usisiri kupisa simba.
Zvakanaka kuzivisa chiremba wako kana iwe uri pane chero mimwe mishonga kunyanya iyo inogona kudzvinyirira immune system. Kupindirana kwezvinodhaka-zvinodhaka zvinokanganisa iyo pharmacokinetics, zvichitungamira mukuwedzera kana kudzikira kweimwe yeiyo Semuenzaniso, orlistat inogara ichikanganisa mashandiro emishonga yakatemwa kune imwe nhengo yekuisira.
Kana uri pa cyclosporine, chiremba wako angangokuudza kuti urege orlistat. Zvisinei, iwe unogona kurongedza chete nemirayiridzo yakaoma. Kuti uve parutivi rwakachengeteka, unofanirwa kutora maawa maviri asati ava nemishonga yekugadzirisa uremu kana maawa maviri gare gare.
Uyezve, iwe unofanirwa kutaura mishonga yemishonga uye isiri mishonga, kudya kwezvokudya, mavitamini, anticoagulants, kana mishonga yemishonga iwe unogona kutora.
Vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa
Iyi mishonga yekudzivirira kuyerwa haisi yevana vanotarisira, chero munhu anoronga kubata, kana kunwisa mums. Iyo mishonga haifaniri kunge iine kurasikirwa kwehutano uye ichaguma ichikuvadza fetus.
Que hisquequequequequeque produits his his his his his hisque hisque following following his his following produits produits his followingque onque his hisque followingque produits his his his followingque his his hisque followingque hisqueque following produitsque produits produits his his hisquequequeque his his following his followingque his his followingqueque his followingque followingque following his his followingque his hisquequeque following his hisqueque hisqueque his hisque hisque his his hisque his his hisque hisque hisque his his hisquequequeque his hisque produits followingquequeque
Orlistat ndiyo iyo munhu wese ane chirwere cheshuga anoda kuvandudza nekudzivirira shuga yeropa nekuvandudza glucose kushivirira. Kunyange zvakadaro, iwe uchafanirwa kuongororwa nehuga huwandu uye nguva dzose unoshanyira chiremba. Queque hisqueque his hisquequequeque his his his hisquequequequequequequeque his hisque followingque hisque his hisque produits hisque hisque produits hisque following hisqueque followingque his following followingque followingqueque his his hisqueque followingque hisque hisque produitsqueque his followingque following produitsque following following following his produitsque followingquequequeque produitsque hisqueque his his produitsqueque hisque his hisque hisque hisque his followingque produits hisque hisquequequequeque hisqueque followingqueque followingque produitsquequeque
Kungofanana nemishonga yakawanda, orlistat ine migumisiro yaro. Icho chinonyanya kukosha chikamu chinogara chichionekwa mumitemo yemhuka. Zvisinei, izvi zvinogona kuonekwa chete mumavhiki mashomanana ekutanga kutora kurasikirwa kwemishonga.
Kune vamwe vanhu, zviratidzo zvinogona kuderedza nguva kune vamwe; inogona kuramba ichiendesa kanalistat. Panguva ino, zvakachenjera kuudza chiremba wako. Kunyanya kutenderera iwe uri kune kudya kwemafuta-mafuta, zvinowanzove ndezvemigumisiro yekuderedza.
Heano mamwe maitiro akafanana;
Kunyange zvazvo kusina njodzi, steatorrhea ndiko kuvapo kwemafuta uye mafuta akawandisa muchitsiko. Kubvira kana orlistat inhibits lipases, hakuzovi nekugadziriswa kwemafuta emafuta. Somugumisiro, zvimedu zvichaonekwa seine mafuta uye zvinotyisa.
Kuti udzivise izvi, mumwe anofanirwa kudzivisa kudya zvakakosha mumakoriri uye mazinga akawanda-mafuta. Maererano nemitemo ye FDA, mari yacho inofanira kunge iri mukati ma0.53 ounces uye isingapfuuri 30%.
Muzviitiko zvakawanda, gasi inobuda kunze kwekubuda kwemafuta. Iwe unofanirwa kuongorora zvipfeko zvako kana zvepurasitiki nekuda kwekuona mafuta.
Kusununguka, kukurumidzira, uye nguva dzose kutama kwemakumbo
Kusuruvara uye kurwadziwa mumimba
Kuenda kumwedzi kusina nguva
Nhamba yehuga yakadzika
Izvi zvakajairika pakati pevanhu vane chirwere cheshuga chechipiri II.
Kuora kwechiropa zvakanyanya
Zviitiko zvakadaro hazviwanzo asi zvinogona kuitika kana uine zvimwe zvinokanganisa chiropa, kana iwe uchitora yakakwira dosi. Muna 2010, FDA yaisanganisira yambiro yekuchengetedza pamazita eorlistat, ayo anoratidza njodzi yekukuvara kwechiropa.
Nekudaro, iyi mhedzisiro mhedzisiro ichiri gakava tichifunga kuti imwe nyaya yekuongorora yakaburitswa paBritish Medical Journal yakaratidza zvimwe.
Zvimwe zviratidzo zvinonyevera zvechirwere chechiropa zvinosanganisira kurutsa, kurwadziwa kwepamuviri, ganda rinopenya, uye urinhi.
Hazviwanzoitiki kuti uwane chero hypersensitivity kana kugadzirisa zvinokonzera kana uchitora orlistat kurasikirwa piritsi. Kune vamwe vanhu, zvisingabatsiri zvinoshandiswa mumushonga zvinogona kukonzera kushungurudzika, kubvarura, kuputika, kuputika kwemuviri, kufema kunetseka, kana chizuru.
Mamwe mhedzisiro asinganyanye kujairika anosanganisira kushushikana, kutemwa nemusoro, kubuda ropa, kusagadzikana rectal, kuneta, kushaya chikafu, uye gallstones. Kana iwe uchinge uchinge uchinge waona zviratidzo zvakanyanya, iwe unofanirwa kuzivisa chiremba wako nekukurumidza kana kuudza kune FDA Kubika Chirongwa.
Chirevo chekupedzisira paOrlistat poda
Kunyange zvazvo orlistat ine zvikamu zvishoma zvemigumisiro, iyo yakaisvonaka inorema kurasikirwa kurapwa iyo ichapa mhinduro mukati memavhiki maviri. Chakavanzika chokubatsirwa neizvi zvinodhaka zvinotevera mirayiridzo, kunzwisisa zvinodzivirira, nekuongorora nezvekudya kwako.
Sezvaunotora orlistat, zvakakosha kutevera chirongwa chakanaka chekudya, kudya mafuta mashoma, pasi makorikori, nekuita muviri nguva dzose. Kudya kwakakodzera kunofanira kusanganisira zvimwe zvibereko, miriwo, uye mbeu. Uyezve, unofanirwa kuwedzera kudya kwako nemishonga yakakosha yemiti yakakosha kubva ku-orlistat inodzivisa kudya kwemavhithamini ane mafuta.
Paunenge uchikahadzika, unogona kuonana nemudzimai wako wemishonga kana chiremba kuti uwane mamwe mirayiridzo. Zvimwewo, unogona kutaura neU.S. Food and Drug Administration kune chero mibvunzo kana kuudza hupenyu hwehupenyu hunotyisa, husina kunyorwa.
Nzira yekutenga Orlistat powder (96829-58-2) kubva paAASRAW